पेटमा बोसो बढेर तनाबमा हुनुहुन्छ ? खाना खानु अघि यस्तो जुस खानुहोस् । – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lifestyle/ Health/पेटमा बोसो बढेर तनाबमा हुनुहुन्छ ? खाना खानु अघि यस्तो जुस खानुहोस् ।
बिगुल स्वास्थ्य, काठमाडौँ । यदि तपाईको तौल अधिक नै छ भनेपनि तपाईलाई अस्वस्थ भन्न मिल्दैन् । किनकी संसारमा यस्ता पनि मानिसहरु हुन्छन् कि मोटो नै भएपनि सबैभन्दा बढी स्वस्थ तिनै मानिसहरु भएको पनि उदाहरण देख्न पाईन्छ । तर फेरी तौल संतुलनमा भएपनि रोगको भण्डार भएका मानिसहरुको पनि कमि छैन् यहा । जुन मेटाबेलीज्म संग संबन्धीत रोगहरु हुन्छन् ।
यदि तपाईको शरीरमा मेटाबलिज्म को मात्रा अत्यधीक छ भने तपाईको तौल कुनै हातलमा पनि बढ्न सक्दैन् । जसकारण तपाईहरु सबै काम छोडेर यसको समाधान तर्फ लाग्दा पनि यसको समाधान हुन सकेको हुदैन् । यसका लागि कस्ता उपायहरु अपनाउने त ?
जुन कुराको प्रयोगबाट तपाई यस्तो समस्याबाट सजिलैसंग छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ । आउनुहोस् यस्ता चिजहरुको बारेमा चर्चा गरौँ जुन चिजहरुले तपाईका माथि उल्लेख भएका सबै समस्याको समाधान गरिदिन्छ ।
यस्तो एक प्रकारको ड्रिंक छ जुन को सेवनले तपाईको शरीरमा जमेको टाँक्सिन तथा फ्याटलाई कम गरी पीएच को मात्रालाई कम गर्नमा सघाउछ । यस्तो क्यान्सर जस्तो रोग लाग्नुको मुख्य कारण एंटीअक्सीडेडलाई रोकथाम गर्नु मुख्य कारण हुन जान्छ ।
जुन चिजको सेवनले एक प्रकारको सेल जस्तै कार्य गरी शरीरमा भएका अन्य बिशालु पदार्थहरुलाई शरीरबाट तुरुन्त निकाल्न मद्त गर्दछ । यसका साथै पेट संबन्धी समस्या बाट छुटकारा पाउनुका साथै मोटोपना नियन्त्रणमा आउदछ । दैनिक रुपमा यस्तो चिजको सेवन गर्नुहोस् जुन चिजले तपाईको आकर्षक ज्यान बनाउनमा सहयोग गर्दछ ।
१. एक चम्चा मह
२. दुई चम्चा स्याउको गुदी
३. एक कप जति मौषमको रस
दिएका सामाग्रीहरुलाई एउटा मिक्सर मा राख्नुहोस् र मजासंग मसिनो हुनेगरी चलाउनुहोस्, यो चिजलाई खाना खानुअघी सेवन गर्नुहोस् । यस्तो प्रकृया ७ दिन सम्म दोहार्याउनुहोस् । ७ दिन पश्चात सेवन गर्न छोड्नुहोस् । यदि आवश्यक लागेमा पिउन पनि सकिनेछ । तर यसरी ७ दिनसम्म नियमित रुपमा पिएमा पेट संबन्धी समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । यदि मौषम मन नपरेमा सुन्तला पनि प्रयोग गर्न सकिने छ । -एजेन्सी